Akanjo kanto eran-tany eran-tany eran-tany eran-tany Eoropeana volon'ondry balonany polyester vita amboradara ho an'ny efitrano ankizy Mpanamboatra, mpamatsy, orinasa - Zhejiang Rancho Santa Fe trano lamba Co., Ltd
● Volavola volon'ondry volon'ondry volo, polyester 100%, habe namboarina.
● Ny ambainy dia vita amin'ny lamba polyester 100% isan-jato avo lenta ary hikorontana sy hifangaro amin'ny varavarankely. Ny takelaka tsirairay dia misy grommets volafotsy tsy misy fangarony 8 mirefy 1.6-inch amin'ny savaivony anatiny avy.
● Ny lambam-baravaranay voile dia natao hanivanana hazavana ary avela hivoaka amin'ny varavarankely izy hanazava ny efitrano. Ny ambainy fotsy dia manome atmosfera milamina sy malefaka amin'ny haingon-tranoo.
● Safidy malalaka misy habe samihafa azo ampiasaina. Mety amin'ny fanaingoana lakozia, efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fandraisam-bahiny, efitran-jazakely, ary efitranon'ny ankizy.
● Aza manapotsitra ary aza mianjera vy maina sy mafana. Aza mampiasa lamba malefaka hiarovana ny lamba.
Product Name Akanjo amboradara volon'osy balonika haitraitra eropeana ho an'ny efitranon'ny ankizy
Ora nanomezana Lamba: 30-35 andro, ambainy: 50-60 andro.
Famolavolana mafana mavokely Mosaic Duvet Cover 3 Pieces Set Soft Cover Comforter
Volon'ondry mafana malefaka marefo marevaka fotsy fotsy HF29029
Embroidery 100% Polyester Beds nyebar HF29034 Set Quilt Coverlet
Curtains amin'ny efitrano fandriam-baravarankely voaravaka lamba mainty